Ahoana ny fikarohana ireo vokatra?
Azonao atao ny mikaroka ny vokatra amin'ny alalan'ny fampidirana ny anaran'ilay vokatra na tenimiafina ao amin'ny bara fitadiavana eo an-tampon'ny pejy. Miezaha hiditra amin'ny famaritana ankapobeny. Ny teny fanalahidy misimisy kokoa ampiasainao, ny vokatra vitsy kokoa azonao ao amin'ny pejin-kaonty. Afaka mifidy sokajy iray ianao mba hikarohana.
Ahoana no hamahana ny fandaniana amin'ny fandefasana entana?
Izahay WoopSop Manolotra fanamiana maimaim-poana iraisam-pirenena ho an'ny mpanjifantsika amin'ny vokatra rehetra, midradradradra!
Inona no atao hoe mpividy Protection?
Ny fiarovana ny mpividy dia kitapom-panomezana izay ahafahan'ny mpividy entana am-pahamendrehana amin'ny tranokalantsika.
Voaaro ianao rehefa:
Ny zavatra nandidianao dia tsy tonga tao anatin'ny fotoana nampanantenaina.
Ny zavatra tsy nandray araka ny voalaza.
Ny zavatra nandray izay nanome toky ho tena dia hosoka.